Sarifleyaasha Somaliland oo ka dalbaday Madaxweynaha la doortay kullan deg deg ah
Sarifleyaasha oo ugu baaqay Madaxweyne Muuse Biixi inuu si deg deg ah uga tallo-qaato wax ka qabashada qiimaha dhaca lacagta Dalka iyo Sicir-bararka…Daawo Waraysi Guddoomiyaha Ururka Sarifleyaasha
Guddoomiyaha Sarifleyaasha oo ka waramay Xaalada Sicir-bararka..Video
Hargeysa(GNA)-Axmed Xasan Mataan, Guddoomiyaha Ururrka ay ku bahoobeen Sarifleyaasha wadhatada ah ee Magaalada Hargeysa, ayaa sheegay in wax ka qabashada hoos-u-dhaca qiimaha lagu sarifo lacagta Dalka marka lagu bedellayo Dollar-ku, ay u baahan tahay tallo qaran iyo go’aan adag oo lagu waajaho waxyaabaha sal-dhiga u ah inay lacagta dalku qiimo dhacdo.
Guddoomiyaha oo u waramay Telefishanka STN qaybtiisa Afka Soomaaliga ku hadla, ayaa intaa ku daray in xal-u-helida dhibaatada Sicir-bararka iyo jahawareerka ka taagan Sarifka lacaguhu ay tahay mid u baahan in uu madaxweynaha cusubi ka hor mariyo dhamaan howlaha kale ee sugaya, isagoo carrabka ku adkeeyey. “waxaanu nahay dadkii xoggogaalka u ahaa ee og sida xalkeedda loo helayo wax ka qabashada Sicir-bararka, sidaa darteed waxaan kaa codsanaynaa inaad noola kulanto sida ugu dhakhsaha badan”ayuu yidhi.
Afhayeenka Sarifleyaashu wuxuu sheegay inay Xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo ku guul-daraysatay meel-marinta go’aamadii ay hore uga soo saartay Sicir-bararka, balse madaxweynaha cusub uu ku khasban yahay inuu xal deg-deg ah raadiyo, si loo badbaadiyo nololsha Bulshada iyo Dhaqaalaha dalka.
Wuxuu sheegay inay halis ku jirto nolosha dadka danyarta ahi, iyaguna waa Sarifleyaashuye ay khasaare joogto ah kala kulmaan.
Haddaba halkan hoose ka Daawo Waraysiga oo dhamaystiran:
Geesta kale, Barkhad Axmed Coofiye oo kamid ah Sarigleyaasha Suuqa Waaheen ayaa isna sheegay inay lacagta Shillinka ee dalku ku dhex wareegto Sarifleyaasha iyo Bangiga dhexe ee dawladda, kana baxday suuqa kala Iibsiga maceeshada, taasina soo dedejinayso inay saaxadda ka baxdo lacagta dalku.
“Boqolka Dollar labadii todobaad ee u dambeeyey waxa lagu sarifayey hal milyan iyo soddon kun oo shillin, mana muuqdo isbedel hoos u soo noqonayaa. Awal hore masaariifta ayaanu ka heli jirnay sarifka balse hadda waxba kama helno oo annagaaba khasaare joogto ah qabna, kaashkuna wuxuu ku wareegaa Sarifleyaasha iyo Bangiga” ayuu yidhi.
Sababta sii liciifisay sarifka lacagaha, ayaa waxay ku sheegeen hakad ku yimi gabi ahaanba dhaqdhaqaaqii kala-iibsiga Hantida iyo Lacagta Jaadka ee Itoobiya loo dirro oo lagu bedello lacag Dollar ah, halka markii hore lacagta Birrta ah ee Itoobiya lagu dirri jiray Qaayimada Jaadka.
Dadka reer Somaliland ayaa si weyn uga cabanaya saameynta sarifka lacagtu ku yeeshay xasilloonidii dhaqaalaha, iyadoo dhibaatada ugu ba’an la baxaa-degayaan Shaqaalaha Dawladda, Ciidamada iyo dadka danyarta ah .
Previous: Hanti-dhowraha guud oo joojiyey Iibinta iyo bixinta Dhulka Dawladda iyo Adeegyo kale
Next: Muuqaal Argaggax leh: Fadlan Caawi Carruurta dhibaateysan